वित्तीय साक्षरता Archives ~ Page 20 of 25 ~ Banking Khabar
साधारणसभा के हो ? कसरी गर्ने निर्णयहरु ? (हेर्नुस् विस्तृतमा)
जान्नुहोस् विस्तृतमा ‘अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली’
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैँकको मातहतमा रहेको एक पब्लिक कम्पनि हो । वि.सं. २०६५ साल मंसिर ९ गते यस कम्पनिको स्थापना गरिएको थियो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैँक लगायत कमर्सियल बैँक, विकास बैँक, फाइनान्स र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीज …
बीमाले कसरी गर्छ जोखिम व्यवस्थापन ? हेर्नुस् तीन बुँदामा
बीमालाई जोखिम व्यवस्थापनको साधन भनिन्छ । भविष्यमा आई पर्न सक्ने क्षतिका बारेमा पहिल्यै विचार गरी त्यसको उचित व्यवस्था गर्नु जोखिम व्यवस्थापन हो । यही काम बीमाले गर्ने गर्दछ । न्यूनतम खर्च (बिमाशुल्क) मा आफ्नो सम्पत्ति, आम्दानी, आइपर्ने दायित्व एवं कामदारको …
के हो वित्तीय साक्षरता ? किन छ यसको महत्व ? (हेर्नुस् रिपोर्टमा)
वित्तीय साक्षरतालाई सामान्यतया बचत, लगानी र कर्जा लगायत विभिन्न पद्धतिका विषयमा जानकारी दिने शिक्षाको प्रकारको रुपमा बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकतालाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सरकारी तबरबाट पनि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विगतदेखिनै कतिपय कार्यक्रमहरु संचालित छन् । …
किन बाउन्स हुन्छ चेक ? चेक बाउन्स हुँदा के गर्ने ?
भुक्तानीका निम्ति दिएको चेक बैङ्कबाट भुक्तान हुन नसकी फिर्ता हुनु भनेको ‘चेक बाउन्स’ हुनु हो । खातावालाले कसैलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स हुने गर्छ । पटकपटक एउटै चेक बाउन्स भएमा …
पुनर्बीमा के हो ? किन र कसरी गरिन्छ ?
पुनर्बीमा भन्नाले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाको पनि बीमा गर्ने व्यवसाय हो अर्थात् बीमा कम्पनीहरुले आफूले रक्षावरण गरेको बीमाको सम्पूर्ण जोखिम आफैंले बहन गर्न नसक्ने भएकोले त्यसलाई वा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमको हस्तान्तरण एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा गर्दछन् जसलाई …
जीडीपीमार्फत अर्थतन्त्रको मापन कसरी गरिन्छ ? हेर्नुस् रिपोर्टमा
फिलिप लेपेनिज- कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) इतिहासकै सबैभन्दा बढी सशक्त मेट्रिक (मापन औजार) हो । यसलाई अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले ‘२१औं शताब्दीका केही महान् आविष्कारमध्येको एक’ भनेको छ । तर, यसको उपयोगिता र निरन्तरताले भने आर्थिक सोचको भन्दा पनि राजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित …
मोबाईल बैंकिङ : किन आवश्यक छ ? कसरी गर्ने प्रयोग ?
बैँक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबार ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नका लागि मोबाइल अर्थात ट्याबलेट बाट नै बैँकिङ कारोबार गर्न सकिने गरि विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरु उपलब्ध गराउने गरेका छन्, जसलाई मोबाइल बैँकिङ भनिन्छ । आजको युगमा मोबाइल फोन नबोक्ने व्यक्तिहरु कमै …
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने समग्र वस्तु र सेवाहरूको औसत मूल्यस्तरमा वृद्धि भएको र यस्तो वृद्धि निरन्तर भएको अवस्था मुद्रास्फीति हो । यसको मतलब, केही वस्तु वा सेवाको मात्र मूल्यवृद्धि भएमा त्यसलाई मुद्रास्फीति भनिँदैन । यसका लागि समग्र मूल्यस्तरमा वृद्धि भएको हुनुपर्छ …
कति प्रकारका हुन्छन् बीमा ? कस्तो बीमा किन गर्ने ?
‘बीमा’ शब्द फारसीबाट आएको शब्द हो । जसको अर्थ हुन्छ– ‘भावार्थ’ अर्थात ‘जिम्मेवारी लिनु ।’ तर विभिन्न विश्लेषकहरुले बीमालाई जोखिम हस्तान्तरणको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । बीमा भनेको आर्थिक नोक्सान हुँदा दिइने क्षतिपुर्तिको ग्यारेन्टी हो । तर बीमा …